Fitaovana fanandratana hafa, Mpamatsy fanontam-pirinty amin'ny fiara | EPONT Jack
an-trano > Products > Fitaovana fanandratana hafa
Ny haavon'ny creeper fiara dia ambany, izay miantoka ny fahafahany mivezivezy tsara ary afaka mandalo mora foana amin'ny fanambanin'ny fiara. Mety ho an'ny karazana fiara rehetra izy io ary tsy ho an'ny fampiasana an-trano ihany, fa ho an'ny fivarotana 4S ihany koa.
Fantsona vy ny vatan’ilay creeper fiara, izay mahazaka 300 lbs ambony indrindra ary azon’ny olon-dehibe mandry eo amboniny. Ny endriky ny sodina vy dia rakotra loko, izay afaka misoroka ny harafesina ary mampitombo ny fiainana.
Misy kodiarana enina enina eo amin'ny farany ambany amin'ny creeper fiara izay malefaka sy finday. Azonao atao ny mifehy ny creeper fiara mba hijerena ny zorony rehetra amin'ny chassis fiara nefa tsy miala amin'ny zoro fiarovana.
Ity milina fanontam-pirinty ity dia natao hanitsiana, hiondrika, fanindriana ary fitomboka.
Namboarina mpanamboatra fitaovana fanandratana hafa avy any Shina
The Jack Sample Show.Ny vokatray dia nandalo ny CE, GS& TUV fanamarinana ny Vondrona Eoropeana. Ny kalitaon'ny vokatray dia marina sy azo ianteherana. Amidy tsara any amin'ny tsenan'i Eoropa sy Amerika izy ireo. Ny vokatra rehetra dia mampiasa sary hosodoko fiarovana amin'ny tontolo iainana electrostatic sy - 45 ° hydraulic menaka, ka azo ampiasaina amin'ny faritra mangatsiaka be. Matokia anay epon. Raha misafidy ny epont isika dia hanohy hanao tsaratsara kokoa sy tsaratsara kokoa
ny toe jack
new toe jack ,Ny vokatray dia nandalo ny CE, GS& TUV fanamarinana ny Vondrona Eoropeana. Ny kalitaon'ny vokatray dia marina sy azo ianteherana. Amidy tsara any amin'ny tsenan'i Eoropa sy Amerika izy ireo. Ny vokatra rehetra dia mampiasa sary hosodoko fiarovana amin'ny tontolo iainana electrostatic sy - 45 ° hydraulic menaka, ka azo ampiasaina amin'ny faritra mangatsiaka be. Matokia anay epon. Raha misafidy ny epont isika dia hanohy hanao tsaratsara kokoa sy tsaratsara kokoa
Ny vokatray dia nandalo ny CE, GS& TUV fanamarinana ny Vondrona Eoropeana. Ny kalitaon'ny vokatray dia marina ary r
Ny vokatray dia nandalo ny CE, GS& TUV fanamarinana ny Vondrona Eoropeana. Ny kalitaon'ny vokatray dia marina sy azo ianteherana. Amidy tsara any amin'ny tsenan'i Eoropa sy Amerika izy ireo. Ny vokatra rehetra dia mampiasa sary hosodoko fiarovana amin'ny tontolo iainana electrostatic sy - 45 ° hydraulic menaka, ka azo ampiasaina amin'ny faritra mangatsiaka be. Matokia anay epon. Raha misafidy ny epont isika dia hanohy hanao tsaratsara kokoa sy tsaratsara kokoa